Apple inovhura software yayo zvishoma; Siri, anonyanya kubatsirwa | IPhone nhau
Apple inovhura software yayo zvishoma; Siri (sevashandisi), vanobatsirwa zvakanyanya
Ndizvozvo. Chikamu chekufungidzira icho chaive chaongororwa zvine chekuita ne Siri. Ini ndinoti "pamwe" nekuti iro idzva vhezheni harina kuunzwa iro raizotora mukana weiyo VocalIQ tekinoroji uye yaizosiya kukwikwidza "mumachira", asi SDK yakaburitswa iyo inobvumidza vechitatu-bato vanogadzira izvo vedu chaivo mubatsiri anogona kuwana pindirana nemaapplication asina kugadzirwa neApple.
Sezvatove tafambira mberi masikati ano, Runtastic Chichava chimwe chekutanga kunyorera kutora mukana kugona kwaSiri. Zvinoenderana nevagadziri vayo, tinogona kuudza Siri kuti "Ndiri kumhanya kwemaminetsi makumi matatu" kuitira kuti inzwisise kuti inofanirwa kuvhura Runtastic uye kutanga chiitiko chataratidza, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chakanaka kwandiri asi icho chinogadzira kumwe kusahadzika (kwakadai sekuti Iwe unozoziva sei kuti ini ndoda Runtastic kuti ive iko kunyorera kwandinoda kushandisa?). Asi uku kuchave kutanga chete.
Siri, mubatsiri wedu achatibatsira zvirinani muIOS 10
Kune rimwe divi, ini handizive kana iwe wakambotumira tweet kana email kubvunza Siri nezvayo. Iyo inonyatso gadzikana, asi isu tinogona kungoita izvi nemaapplication akaita seFacebook, Twitter kana Apple ndeyavo. Kutanga neIOS 10, apo maapplication achigadziriswa uchishandisa iyo nyowani Siri SDK, tinogona kuita zvakafanana nekushandisa seWhatsApp, chimwe chinhu chandakambotaura pane akasiyana masvondo apfuura. Uye, kana tisingade Apple application uye tichisarudza iyo yeGoogle, zvinokwanisika (ini handidi kutora izvi zvechokwadi nekuti ivo vakanangana nemakwikwi) kuti mune ramangwana tinokwanisa kubata Google vanobata kana kutumira maemail nevakuru kushandiswa kweGmail.
Asi kuvhura apple software hazvingomiri ipapo. Kunyangwe Siri ichave iri, futi zvakare, yakakosha poindi yeIOS 10, pachavewo nemamwe maficha anozotora mukana wekuvhura uku. Semuenzaniso, mukushandisa kweTerefoni, patinowana kadhi remubata ane WhatsApp akaisirwa (muenzaniso wenguva dzose), sekureba sekunge isu takaita kuti iiswe, tinokwanisa kumudaidza zvakananga kubva kunharembozha. Izvi zvichave zvakare kuwanikwa mune mamwe maficha senge Viber kana Line.
Uye mameseji? Chii chaitika ne iMessage yeApple? Icho chaive chimwe chekuodzwa mwoyo kweiyo WWDC16 kiyi, kunyangwe vazhinji vedu tichifunga kuti zvakaoma kuti ikunde pakati pevashandisi veApple. Chero zvazvingaitika, iMessage rava chikuva. Izvi zvinorevei? Zvakanaka, haichashandi chete kutumira mameseji. MuIOS 10 tinogona tumira mari NeMessage app, vagadziri vachakwanisa kugadzira zvemukati zveiyo yepamutemo iOS mameseji app. Uye kwete izvo chete: sekuverenga kwandakaita mune dzakasiyana midhiya, ivo vanogadzira ivo vachakwanisawo kugadzira mafomu enderana neMessage, saka isu tinogona kuzowona chechitatu-bato maapplication anogona kuwana iMessages munguva pfupi.
Izvi zvine musoro here? Hongu zvinoita, asi ini handifunge kuti iinayo kune vashandisi veIOS. Vashandisi veiyo iPhone, iyo iPad kana iPod Kugunzva vanotova nechishandiso chakaiswa nekusarudzika uye, ichive icho chirevo cheApple chairo, chichagara chiri chakanakisa sarudzo. Zvinoita zvine musoro kana maapp aya akaonekwa mune zvimwe zvitoro zveapp, senge Google Play kana Windows Phone. Muchidimbu, ivo havana kuburitsa iMessage yeApple, asi mukova hauna kuvharwa.
Chero zvazvingaitika, tiri muna Chikumi 14, zvave kungori zvishoma kupfuura zuva kubva ipapo iOS 10 Inowanikwa mu beta uye vashanduri vari kushanda maawa makumi maviri nemana zvakanyanya nematurusi matsva ayo Apple akaita kuti iwanikwe. Chii chinonzi 24% chakasimbiswa ndechekuti Siri anozokwanisa kudyidzana nevechitatu-bato kunyorera uye isu tichakwanisa kuita mamwe akawanda mabasa pasina kubata mudziyo wedu, uyo pakupera kwezuva uchaderedzawo kushandiswa kwesimba kunotora kubva screen inobata. Uchashandisa sei Siri kana ichibatana neyechitatu-bato kunyorera?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Apple inovhura software yayo zvishoma; Siri (sevashandisi), vanobatsirwa zvakanyanya
Swift Mitambo yekutamba iko kunyorera kwevana kuti vadzidze kodhi
iOS 10 uye nhau dzayo